प्रहरीले नै कानुन उल्लंघन गरेपछि कारबाही कसले गर्ने? - नेपाल समय
प्रहरीले नै कानुन उल्लंघन गरेपछि कारबाही कसले गर्ने?
जनकपुरधाम - नियमकानुन सबैलाई बराबर हुन्छ। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन’ नेपालको प्रचलित उखान हो। यो प्रसिद्ध उखान सोमबार जनकपुरमा प्रमाणित भएको छ।
आमजनताले ‘नो पार्किङ’ लेखिएको स्थानम गाडी पार्क गरे प्रहरीले कानुनअनुसार कारबाही गर्छ। तर प्रहरी प्रशासनकै उच्चपदस्थ अधिकारीले नियमकानुन उल्लंघन गरे कसले कारबाही गर्ने?
यस्तै देखियो सोमबार जनकपुरको शिवचोकमा। नो पार्किङ लेखिएको स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायतका उच्चपदस्थ प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुका गाडी रोकिएको थियो। त्यहाँ ड्युटीमा खटेका ट्राफिक प्रहरीहरुले पनि ‘नो पार्किङ’ मा गाडी पार्क नगर्न हाकिमहरुलाई भत्रे आँट गर्न सकेनन्।
शिवचोकस्थित वेलकम होटलमा नेपाल–भारत सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठक आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा सहभागी हुन भारतको विहार राज्यको मधुबनी जिल्लाबाट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डिएम), एसपी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जनकपुर पुगेका थिए।
भारतीय अतिथिका गाडी होटलभित्रै पार्किङ गर्न लगाइएको थियो भने नेपालका प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरुके गाडी सडक पेटीको ‘नो पार्किङ’ मा पार्क गरिएको थियो।
व्यक्तिगत काम लिएर पुगेका आमनागरिकलाई त्यहाँ ड्युटीमा खटेका ट्राफिक प्रहरीहरुले पार्किङका लागि छुट्याइएको स्थानमा मोटरसाइकल पार्क गर्न निषेध गरेको थियो। तोकिएको स्थानमासमेत गाडी पार्क गर्न नपाउँदा सर्वसाधारण कार्यक्रमस्थल भन्दा पर पार्किङस्थल खोज्दै भाैंतारिरहेका देखिन्थे।
पार्किङका लागि तोकिएको स्थानमा समेत गाडी पार्क गर्न नपाएका कतिपयले सुरक्षा प्रमुखका गाडी देखाउँदै ‘नो पार्किङ’ मा गाडी राख्न पाइने तर हामीले तोकिएको स्थानमा समेत राख्न नपाउने भन्दै सुरक्षाकर्मीसमक्ष प्रश्न गरेका थिए।
गत साता शिवचोकमै जनकपुर उपमहानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले ‘नो पार्किङ’ मा रोकिएका एक दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधनमाथि कारबाही गरेका थियो। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले नै नियम तोडेपछि कसैको केही चलेन।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दीपक साहले खास अवसर भएकोले यस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए।
खुमलटार र बालुवाटारमा छुट्टाछुट्टै भेला : स...
भोलिदेखि तीन दिन भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन...
विप्लवका उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज मध्यरातमा ...